မော်စီ နှင့် သူ၏အိပ်မက်များ
Uni Mon ဖောင့်ယူရန်
Uni Mon Keyboard Diver
Uni Mon keyboard Layout
စိုးမြနန္ဒာ . . .
C Box လို့ခေါ်တယ်
C Box ထည့်ခြင်း
C Box နောက်ခံထည့်ခြင်း
Peekaboo Sidebar လုပ်ခြင်း
Peekaboo Navigation Bar လုပ်ခြင်း
Peekaboo Comments လုပ်ခြင်း
ကျနော့်ရဲ့ ပိုစ့်အသစ်များကို mozistar.co.cc မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ ပိုစ့်အသစ်များကို ဖတ်ရှု့ရန်အတွက် mozistar.co.cc ကိုကြွခဲ့ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:23 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ဟိုး . . . အဝေးကို
ရေးသားသူ မော်စီ at 9:40 PM5ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
တစ်နေ့မှာ ကျနော်မော်စီသည် ဘလော့လည်ရင်း ကိုရာမညဖိုးလပြည့် ဆိုဒ်ကိုရောက်ရှိသွားပါသည်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ပိုင် website (or) wordpress တစ်ခုဖန်တီးခြင်း ဆိုတဲ့ ပိုစ့်တွေကိုဖတ်မိပြီးနောက်ပိုင်း . . . .
ကျနော် wordpress ဆိုဒ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးမိသွားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကိုရာမညဖိုးလပြည့်မှ တစ်ဆင့် mmwordpress.com၊ ကိုရေခါး၊ ကိုမှော်ဆရာ စတဲ့ wordpress ဆိုဒ်တွေကိုသွားပြီး wordpress နဲ့ ပက်သက်တဲ့ပိုစ့်တွေကို မွှေနှောက်ဖတ်၊ သူတို့ရေးထားတဲ့ wordpress ပြုလုပ်နည်း စာအုပ်တွေကို ဒေါင်းလုပ်၊ အဲလိုနဲ့ ကျနော်မော်စီ အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ လုပ်ရင်း အဆင်မပြေတဲ့အခါဆို သူတို့တွေရဲ့ စီဗုံးတွေမှာလိုက်အော် (ကူညီပါအုံးဗျို့ ကယ်ပါအုံးဗျို့ ကျနော်ဒီမှာ @*++%$#@! ဖြစ်နေပါတယ်)။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ wordpress ဆိုဒ်ကို အခုထိစိတ်တိုင်းမကျသေးလို့ မသုံးဖြစ်သေးပါဘူး။ ကလိဆဲကာလဖြစ်လို့ ဆက်ကလိရန်ရှိနေပါသေးတယ်။ wordpress ဆိုဒ်ကို စိတ်တိုင်းကျ ခြယ်လှယ်ပြီးတော့မှ အိမ်ပြောင်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်ပွဲတို့ အိမ်သစ်တက်ပွဲတို့ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ ဘလော့ဂါ မောင်နှမများကို လိုက်လံ ဖိတ်ပါတော့မယ်နော်။ အခုတော့ wordpress ကိုဆက်ကလိလိုက်အုံးမယ်။
wordpress ကမ္ဘာမှာ လွှင့်မျေားရင်း . . . . ..
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:47 PM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကြွေလွှင့်သွားခဲ့တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ . . .
ကြာရောပေါ့ . . . ။
သူမကိုကျနော် ... စတွေ့ခဲ့တာ
သူမက ကျနော့်ကို တွေ့ခဲ့တာ
ဟိုးအရင်ကတည်းကပေါ့ ... ။
ဘာသာမပြန်တတ်ခဲ့ဘူး . . .။
သူမ ဘယ်လိုလုပ်သိသွားတာပါလိမ့် . . .။
နာမည်ကြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေါ့ lol . . .။
ကျနော့်ရဲ့ အူတူတူ အတတ
သဘောကျတယ်တဲ့လေ . . .။
မှတ်တ်ရရ အဲဒီနေ့က သောကြာနေ့လေ . . .။
ပုံမှန် ရွေ့လျားနေတဲ့ နေမင်းကြီးကို
ရောင်စုံပွင့်လို့ပေါ့ . . .။
သဘောကျလို့တဲ့လေ . . .။
အင်း . . . လိုချင်တာကို
အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့လေ . . .။
အဲဒီတုန်းက ကျနော်မသိခဲ့ဘူး . . .။
နေမကောင်းလို့တဲ့ . . .။
ကောင်မလေးရေ . . .။
နှစ်ပါးမသွားစေချင်တော့ဘူး . . .။
သေချာပါတယ် . . .
သူမနဲ့ ပက်သက်တဲ့ လူအားလုံးကို
အပြီးတိုင် နှုတ်ဆက်ကျောခိုင်းသွားခဲ့တယ် . . .။
ပျော်ရွှင်ပါစေ ချစ်ဦးသူရေ . . .။
ရေးသားသူ မော်စီ at 9:34 PM7ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
Cell Phone(Mobile) နဲ့ ဘယ်ဘက်နား
နည်းပညာမှ အံ့မခမ်းတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ နည်းပညာသုံး လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အများအပြားသုံးစွဲနေကြပါတယ်။ ပစ္စည်းတိုင်းမှာ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေရှိနေပါတယ်။ ကျနော် ဒီနေရာမှာ Cell Phone(Moblie) နဲ့ပက်သက်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်။
Cell Phone(Moblie)ကို အသုံးပြုပြီးစကားတဲ့အခါမှာဆိုရင် ဘယ်ဘက်နားကို အသုံးပြုကြပါ။ ညာဘက်နားကို အသုံးပြုရင် ဦးနှောက်ကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံကို လေ့လာကြည့်ကြပါ . . .
From >> http://gurlzgroup.blogspot.com/2007/03/ear-and-cell-phone.html
Source >> Apollo Medical Team
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:27 PM5ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော်၏ စာမေးပွဲသည် ယမန်နေ့တွင်ပြီးဆုံးသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်သည် ပိုစ့်တင်ခြင်းနှင့် အိမ်(ဘလော့) လည်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါသည်။
ကျနော် Virus ကာကွယ်နည်းလေးတွေ့ထားလို့ မျှဝေချင်လို့ပါ။ နည်းကတော့ နည်းည်းထူးဆန်းတယ်။ ဘာ ဆော့ဝဲလ်မှလည်း မလိုဘူး၊ ခက်က်ခဲခဲလည်း ဘာမှကိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လင့်လေးကပုံပါအတိုင်းပြုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျနော်ကတော့ မလုပ်ကြည့်ရသေးဘူး
အဆင်ပြေလား မပြေဘူးလားဆိုတာတော့ ကျနော်အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့။ အဲ ဘလော့ဂါမောင်နှမတို့ လုပ်ကြည့်လို့ အဆင်ပြေရင် ကျနော့်ကိုလည်း ပြန်ပြောပြကြပါအုံးနော် ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး . . . ။
အဆင်ပြေကြပါစေ ဟဲ ဟဲ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 11:22 PM 14 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော်အခုတလော အရမ်းကိုအလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ လာမယ့် တနလာင်္နေ့မှာ ကျနော်စာမေးပွဲလည်းရှိပါတယ်။ အခုကျနော်နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ Uni Mon နှင့် Zawgyi-One ပိုစ့်ကိုလည်း ကျနော်ရေးထားတာကြာပါပြီး မအားသေးလို့ မတင်ဖြစ်သေးပဲ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့ကမှ အချိန်လုပြီး ကျနော်တင်လိုက်တာပါ။
အခုတလော ကျနော်နာမည်နဲ့ ယုန်ကလေး စီပုံးမှာ တစ်ယောက်က်က သွားအော်နေပါတယ်။ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျနော်လည်းမသိဘူး။
ကျနော်နောက်ဆုံး ယုန်ကလေးစီပုံးမှာ သွားအော်ထားတာပါ
13 Jul 08, 04:53
မော်စီ: ယုန်ကလေးရေ နေကောင်းလားဗျ နဲနဲရှုပ်နေလို့ အခုမှ လာလည်နိုင်တော့တယ် ဒါနဲ့ ကျနော့်ရဲ့မွန်ကဗျာလေးကို လာဖတ်ပါအုံးနော်
ကျနော့်ရဲ့ မွန်ကဗျာ နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပိုစ့်ကို လာရောက်ဖတ်ဖို့ သွားဖိတ်တာပါ။ ဒီလိုမျိုး ဘလော့တော်တော်များများကို ကျနော် သွားဖိတ်ထားပါတယ်။ ကျနော်ပိုစ့်ကို ကော့မန်းတွေလည်း အများကြီးပေးသွားကြပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျနော်ယုန်ကလေးဘလော့ကို မရောက်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒီမနက်မှ ကျနော် စီပုံးမှာ ယုန်ကလေး လာအော်တာ
ယုန်ကလေး: မော်စီရေ လာလည်သွားပါတယ်နော် ရင်ခုန်မဲ့စကားတော့မပြောတတ်ဘူးလေ
တွေ့တော့ တစ်ခုခုတော့မှားနေကြောင်း ကျနော်ရိပ်မိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ယုန်လေးဘလော့ကိုသွားကြည့်လိုက်တော့
မော်စီ: လာလည်ပါတယ် ယုန်းလေးရေ ရင်ခုန်မဲ့ စကားတွေ မပြောတော့ဘူးလား
ဒီလိုအော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ယုန်ကလေးရဲ့ စီပုံးက older mesages ကို ကျနော်ဖတ်ကြည့်တော့ ဒီလိုအော်ထားတာကို ထပ်တွေ့ရပါတယ်
မော်စီ: မော်စိဟာ မွန်လေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ်
မော်စီ: အိပ်မက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ ယုန်းကလေးရေ
အဓိက ကျနော်မဟုတ်ကြောင်းကို ယုန်ကလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ IP address ကိုလည်း စစ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော့် IP address ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ( 125.26.48.10)
အခုတလော ကျနော်ဘလော့လည်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျနော့်နာမည်နဲ့ မဟုတ်တာလာအော်ခဲ့ရင်တော့ ကျနော်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးပါရစေခင်ဗျာ။
ဘလော့ဂါမောင်နှမများကို အစဉ်လေးစားလျက် . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 9:35 PM3ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော် မော်စီလေဗျာ။ မွန်လူမျိုးလေး တစ်ယောက်ပေါ့။ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး အစအနောက်သန်တော့ သူငယ်ချင်းတွေက ချစ်ကြတယ်လေ။ စိတ်ဝင်းစားတာတွေကို လေ့လာရင်း ရည်မှန်းချက်အတွက် ကြိုးစားနေလေရဲ့ . . .